प्रचण्डको पुनरावलोकन निवेदन प्रधानन्यायाधीशको बेन्चमा, के होला निर्णय ?
जनतापाटी बिहीबार, चैत १९, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकनको निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको बेन्चमा परेको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डको पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइ अगाडि बढ्ने र नबढ्नेबारे प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको बेन्चले टुंगो लगाउने भएको हो ।
२०७५ जेठ ३ गते भएको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भई बनेको नेकपालाई गत फागुन २३ गते सर्वोच्चले खारेज गर्दै ऋषि कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको थियो । त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूँतिएका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको सो फैसलाप्रति असन्तुष्ट रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको सीमा नाघेर फैसला गरेको र नामको विवाद भए नाम फेर्न मौका दिनु पर्नेमा एकीकरण नै उल्ट्याउने फैसला अन्यायपूर्ण भएको माओवादी केन्द्रको जिकिर छ ।
प्रचण्डको पुनरावलोकन निवेदनमा आज टुंगो लाग्ने, मुद्दा अघि बढ्ला ?
सर्वोच्चलाई माओवादी केन्द्रको प्रश्न- नेकपा विवाद नामको वा दलको अस्तित्वको ?
कानूनी सीमा नाघेर अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ ? [पूर्णपाठ]
सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता, प्रचण्डले भने- ‘फैसला सच्याउने विश्वास छ’